Inguqulo entsha yeLinux 5.9 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Inguqulo entsha yeLinux 5.9 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
ILinus Torvalds imemezele ukutholakala kwenguqulo entsha yeLinux Kernel 5.9 ohlwini lwamakheli. Le nguqulo eyethula izici ezintsha eziningana nokuthuthuka, kanye nabashayeli abasha ngokungeziwe kuzibuyekezo zokushayela.
Ukuthuthukiswa kwe-Linux 5.9 kernel kwaqala cishe ezinyangeni ezimbili ezedlule lapho uLinus Torvalds ememezela ingqophamlando yokuqala ye-Release Candidate (RC). Ngemuva kwama-RC angaphansi kwesishiyagalombili, inguqulo yokugcina ye-kernel isiyatholakala futhi kufanele ithunyelwe kokunye ukusatshalaliswa kweLinux okuthandwa kakhulu emasontweni azayo.
Ngokuqondene namandla kusuka ku-Linux 5.9, kukhona ukwesekwa kokwakhiwa kwe-Unicore, ukusekelwa kwe- Ukucindezelwa kweZstandard (Zsdt) ukuhlanganisa ama-x86 kernels, ukusekelwa okugcwele kwemisebenzi yokufunda kusuka ku- ama-asynchronous buffers ku-io_uring subsystem, kanye nenketho entsha yokutakula kanye nokwenza ngcono okuhlukahlukene kokusebenza kohlelo lwefayela le-Btrfs.
Kukhona futhi ukusekelwa kwemiyalo ye-FSGSBASE x86, ukusekelwa kwamandla komhleli wokugcina, inkinobho entsha ye-sysctl, ukusekelwa kokubethela oku-inthanethi kwezinhlelo zefayela ze-EXT4 ne-F2FS kanye nokuxhaswa kwezilawuli zememori zangaphandle ze-NVIDIA Tegra210 nokusekelwa kwezilawuli ezakhelwe ngaphakathi ze-Chrome OS.
Futhi, I-Linux 5.9 iletha ikholi entsha yohlelo close_range (), ukusekelwa kwe-Intel “Keem Bay” Movidius VPUs, ukusekelwa kweprotocol yokubuyiswa okufanayo, ukusekelwa kwama-BPF iterators kumasokhethi we-TCP kanye ne-UDP, ukusekelwa kwezimpawu ezinwetshiwe zamakhasimende we-NFS 4.2 kanye ne-scheduleutil njenge-default CPU frequency regulator ye-ARM ne-AArch64 yezakhiwo ( I-ARM64).
Futhi Kungezwe ukusekelwa kwamabhodi we-ARM, amadivayisi nezinkundla kuqokonyiswa: I-Pine64 PinePhone v1.2, iLenovo IdeaPad Duet 10.1, i-ASUS Google Nexus 7, i-Acer Iconia Tab A500, i-Qualcomm Snapdragon SDM630 (esetshenziswe ku-Sony Xperia 10, 10 Plus, XA2, XA2 Plus neXA2 Ultra), iJetson Xavier NX, i-Amlogic WeTek Core2 , Aspeed EthanolX, amabhodi amahlanu amasha we-NXP i.MX6, MikroTik RouterBoard 3011, Xiaomi Libra, Microsoft Lumia 950, Sony Xperia Z5, MStar, Microchip Sparx5, Intel Keem Bay, Amazon Alpine v3, Renesas RZ / G2H.
Kumaqembu, kusetshenziswa isibambi sememori esisha, okuphawuleka ngokudluliswa kokubalwa kwesilayidi kusuka ezingeni lekhasi lememori kuya ezingeni lezinto ze-kernel, okwenza kube nokwenzeka ukwabelana ngamakhasi wesilayidi emaqenjini ahlukahlukene, kunokuba kunikezwe amakhekhe e-slab ahlukile eqenjini ngalinye. Indlela ehlongozwayo ivumela ukwandisa ukusebenza kahle kokusetshenziswa kwe-, ukunciphisa usayizi wememori osetshenziselwe i-slab ngo-30-45%, kunciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwenkumbulo okuphelele yi-kernel, nokunciphisa ukuhlukaniswa kwememori.
Mayelana nokuthuthuka ngemidwebo, kugqanyiselwa ukuthi umshayeli we-amdgpu ungeza ukuxhaswa kokuqala kwe-GPU kwe-AMD Navi 21 (INavy Flounder) neNavi 22 (iSienna Cichlid). Kungezwe usekelo lwe-UVD / VCE video encoding and decoding acceleration engines for Southern Islands GPUs (Radeon HD 7000). Kungezwe impahla ukushintshanisa isikrini ngama-90, 180 noma ama-270 degrees.
Kuyathakazelisa ukuthi umshayeli we-AMD GPU umshayeli omkhulu kunabo bonke ku-kernel - iqukethe cishe imigqa yekhodi eyizigidi ezingama-2,71, okucishe kube ngu-10% wosayizi ophelele we-kernel (imigqa eyizigidi ezingama-27,81).
Ngasikhathi sinye, imigqa eyizigidi eziyi-1.79 isemafayeleni enhlokweni akhiqizwa ngokuzenzakalela anedatha yamarejista we-GPU, futhi ikhodi ye-C ingamakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-366 (uma kuqhathaniswa, isilawuli se-Intel i915 sifaka imigqa eyizinkulungwane ezingama-209 neNouveau - 149 XNUMX ).
Isilawuli INouveau ingeza ukusekelwa kokuhlolwa kobuqotho beCRC (I-Cyclic Redundancy Checks) ifreyimu ngohlaka kuzinjini zokubonisa ze-NVIDIA GPU. Ukuqaliswa kusekelwe emibhalweni enikezwe yi-NVIDIA.
Kunjalo, abashayeli abaningi abasha nababuyekeziwe bafakiwe kulokhu okusha version i-kernel ebalulekile yokwengeza ukusekelwa kwezakhi ezintsha zehadiwe. Ezinye izici ezihlobene nokuphepha zikhona, kanye nokulungiswa okujwayelekile kwe-bug kanye nezinguquko zangaphakathi ze-kernel.
Ekugcineni, le nguqulo entsha ingalandwa funa kernel.org, uma ufuna ukwakha i-kernel yakho. Kwabanye, ungalinda i-Linux 5.9 kernel ezinzile ukufinyelela ezinqolobaneni zesoftware ezinzile zokusatshalaliswa kwakho kwe-GNU / Linux ngaphambi kokuthuthukela kusuka enguqulweni edlule.
Ngokuqondene nenguqulo elandelayo yeLinux 5.10, kulindeleke ukuthi ifike maphakathi noDisemba noma ngesikhathi samaholide kaKhisimusi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Inguqulo entsha yeLinux 5.9 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
I-CesiumJS: Umtapo Wezincwadi Womthombo Ovulekile weMephu ye-3D
Njengoba bekulindelwe, iMicrosoft isivele iqale ukwenza ngokuvuza kwekhodi ye-XP